Liverpool oo si layaab leh ugu dhaqaaqday soo xerogalinta goolhaye cajiib ah oo ka ciyaara horyaalka Premier League. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Liverpool oo si layaab leh ugu dhaqaaqday soo xerogalinta goolhaye cajiib ah oo ka ciyaara horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inuu u dhaqaaqo soo xerogalinta goolhayaha Stoke City iyo qaranka England Jack Butland, waxeyna arintaan imaaneysaa xilli jamaahiirta Reds aysan ku faraxsaneyn hanaanka Mignolet iyo Karuis.
Bishii lasoo dhaafay ayey warbaahinta Ingiriiska baahiyeen in Jack Butland uu doonayo inuu u guuro Anfield si uu u noqdo goolhayaha koowaad ee qaranka England isla markaana uu boos ka helo koobka Aduunka ee bartamaha sanadkaan ka dhici doona Russia.
Bleacher Report ayaa baahisay in Jack Butland uu rajeynayo in Liverpool ay bishaan soo xerogaliso isla markaana uu la midoobo ciyaartoyda ay ku midoobaan qaranka.
Liverpool waxey heysataa lacago badan oo ay ka heshay iibka Philippe Coutinho kaas oo 142 Malayn oo Pound ku tagay Barcelona, sidaas darteed waxey isku dayi doonaan iney inta badan suuqa ku bixiso si kooxda loo miisaamo awoodeeda.